ကိုရီးယားလို ဆဲကြမယ် – Trend.com.mm
ကိုရီးယားလိုဆဲကြမယ်လို့ပြောထားပေမယ့် မဆဲမိရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လဲ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုဆဲနေတာလား၊အကောင်းပြောနေတာလား၊အဆိုးပြောတာလားဆိုတာကို သိထားဖို့အတွက် ပြောပြလိုက်တာပါနော်။
1) 꺼저- kkeojeo (ကောဂျော)
2) 개똥 같은 소리- gaettong gat-eun soli(ဂဲတုန်း(င်)ဂါ့ထွန်းဆိုရီ)
စက်ဆုပ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ စကားတွေ… အဓိပ္ပါယ်လုံးဝ မရှိတဲ့စကားတွေ…
3) 진짜 재수 없어 – Jinjja jaesueobs-eo (ဂျင်း(န်)ကျာ ဂျဲဆူ အော့(ဘ်)ဆော)
4) 제정신이야?? – jejeongsin-iya (ဂျယ်ဂျောင်း(င်)ရှင်းနီယာ)
မင်း…ဘာဖြစ်တာလဲ…/ မင်း ဘာဖြစ်လို့လဲ….
5) 쪼다 되는 거야 – jjoda doeneun geoya(ကျိုဒါ ဒွဲနွန်းဂေါယာ)
အခုပြောပြခဲ့တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုသာ ပြောလိုက်မိမယ်ဆိုရင် ပြဿနာအကြီးကြီးတတ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် ဗဟုသုတအနေဖြင့်ပဲမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စကားလုံးလေးတွေကိုလဲထပ်တင်ပေးသွားအုံးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါအုံးနော်။